Hawaii COVID-19 Ọrịa: Otu Ndekọ Dị Elu Mgbe Ọzọ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii » Hawaii COVID-19 Ọrịa: Otu Ndekọ Dị Elu Mgbe Ọzọ
Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • Akụkọ Ahụike • HITA • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Ọrịa Hawaii COVID-19 na-efe efe
Njem nlegharị anya Hawaii na-abawanye, COVID-19 dịkwa n'etiti ndị na-anaghị agba ọgwụ mgbochi dịka ọ dịtụbeghị mbụ. Site na 243 ọrịa coronavirus ọhụrụ, ndị Aloha Steeti nọ na nnukwu nsogbu.
Ọnọdụ ọhụrụ nke COVID-19 na Hawaii na-arị elu ma na-arịgo kwa ụbọchị ihe karịrị otu izu.
N'icheta pasent nke ndị mmadụ na -agba ọgwụ mgbochi ugbu a na steeti ahụ, Hawaii na -ahụ ọrịa ọhụrụ nke karịrị okpukpu abụọ nke ụbọchị edere edere kemgbe oria ojoo a.
Site na mmụba dị otú ahụ na ikpe ọhụrụ, mmadụ nwere ike iche na ọ bụ oge iweghachite ikike njem, mana ruo ugbu a gọọmentị agbanwebeghị ihe ọ bụla.
N'ịbelata ndị a na -agba ọgwụ mgbochi ugbu a na steeti (pasent 60), ọrịa 243 ga -apụta ka ọ pụta nso ọrịa 700 dabere na ọnụọgụ afọ gara aga tupu ịgba ọgwụ mgbochi emee.
Daybọchị kachasị njọ kemgbe oria ojoo a malitere bụ Ọgọst 27, 2020, yana ikpe ọhụrụ 371 kwa ụbọchị. Mana dabere na iwepụta ndị ọgwụ mgbochi, taa bụ mmụba kachasị elu edepụtara na ọrịa ọhụrụ, yana ndị isi njem na -agbachi nkịtị.
Ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ, na ụlọ ahịa juru. Enweghị oghere maka osimiri ndị a ma ama, dị ka Waikiki Beach, ịchọta ebe maka akwa nhicha gị.
Enweghị ndị mbata mba ofesi, mana ndị mbata ụlọ jikọtara ọnụ na -edebanye aha ndị bịarutere karịa karịa tupu ọrịa ọjọọ.
Ọnụ ọgụgụ ọrịa coronavirus na Hawaii erutela ọnụọgụ atọ n'ime ụbọchị asatọ gara aga ma na -arị elu kwa ụbọchị.
Edebara ikpe 146 ọhụrụ na Honolulu County, 50 na Hawaii County, 14 na Maui County, na 8 na Kauai County.
Ihe dị ka pasent 78 nke ikpe na July sitere na mgbasa obodo, pasent 20 sitere na ndị bi na-alọta njem, yana pasent 2 site na njem ndị na-abụghị ndị bi.
Ndekọ ndị bịarutere njem nlegharị anya nwere ike inwe naanị pasent 2 kpatara, nke bụ ozi ọma maka akụ na ụba, mana na -abawanye na ọnụ ọgụgụ, ọ nwere ike ịbụ oge ịtụgharị ihe mgbochi.
Oge ikpeazu Hawaii nọ n'okpuru mkpọchi zuru oke yana ọnụ ọgụgụ ikpe ọhụrụ ka a na-ahụ. Taa, ọ nweghị okwu ndị ọrụ gọọmentị na -ekwu.
Kemgbe Julaị 8, 2021, ndị ọbịa nwere ọgwụ mgbochi ọrịa agaghịzi echegbu onwe ha maka ịnye ule PCR na-adịghị mma iji zere ịpụ iche ụbọchị iri, yana ihe karịrị ndị bịarutere 10 kwa ụbọchị, mgbanwe a na mgbochi mgbochi na-egosi.
Enwere ọtụtụ ndị ọbịa na Hawaii ugbu a ma e jiri ya tụnyere 2019. Ọ bụrụ na ị na -akpagharị ma ọ bụ na -agbada n'okporo ụzọ Kalakaua na Waikiki, naanị ihe dị ka pasent 5 nke ndị mmadụ na -eyi mkpuchi ihu. Agbanyeghị, site na ọnụ ọgụgụ dị elu nke ikpe ọhụrụ, ọ nweghị otu onye gọvanọ nyere iwu ka iyi ihe mkpuchi ọzọ.
Hawaii na -agbaso usoro a na -eme na United States na afọ na -eju ndị mmadụ na enweghị isi. Ha anaghịzi elekọta ikpuchi, nke ga-abụ naanị ihe mgbochi megide COVID-19 ewezuga ịgba ọgwụ mgbochi ọ bụla. Nke a bụ echiche na -emerụ ahụ na mmepe dị ize ndụ.